သတင်း – Page6– Shwemyanmar
အိမ်ရှင်က နှိပ်စက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီတောင်းနေသော မြန်မာအိမ်အကူ အမျိုးသမီး၏ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို စင်ကာပူအာဏာပိုင်များ စုံစမ်းစစ်ဆေး
အိမ်ရှင်က နှိပ်စက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီတောင်းနေသော မြန်မာအိမ်အကူ အမျိုးသမီး၏ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို စင်ကာပူအာဏာပိုင်များ စုံစမ်းစစ်ဆေး ========================== ========================== စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး သည် အိမ်ရှင်၏ နှိပ်စက်ခံရမှု ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီတောင်းခံသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီးနောက် ယင်းဖြစ်စဉ်ကို စင်ကာပူအာဏာပိုင် များက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြု လုပ်သည်။ ‘အလွန်စိတ်ပျက်အားငယ် နေပုံပေါ်သော နိုင်ငံခြားအိမ်အကူ တစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်ကို ရိုက်ထား သည့် All Singapore Stuff ၏ ဗီဒီယိုကို မိမိတို့ သတိပြုမိသည်။ အရာရှိများက ၎င်းနှင့်ဆက်သွယ် နေပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်ကို လောလောဆယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်’ဟု စင်ကာပူလူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန က ယမန်နေ့ညတွင် ထုတ်ပြန် ထားသည်။ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on အိမ်ရှင်က နှိပ်စက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီတောင်းနေသော မြန်မာအိမ်အကူ အမျိုးသမီး၏ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို စင်ကာပူအာဏာပိုင်များ စုံစမ်းစစ်ဆေး
#ထိုင်းထီပေါက်တဲ့မြန်​မာ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်​သားဇနီး​မောင်​နှံ ထိုင်းထီ ဘတ်သိန်6း0 (မြန်​မာ​ငွေ သိန်း၂ထောင်​ကျော်​)​ပေါက်​တဲ့ မြန်​မာ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်​သားဇနီး​မောင်​နှံ့အား 8 -12-2017 နေ့တွင်​ ​နေရပ်သို့ထီ​ပေါက်​​သော​ငွေထုပ်​နဲ့ အတူ ​ဘေးကင်း အဆင်​​ပြေ​ချော​မွေ့စွာ ပြန်​နိုင်​ရန်​ AAC – မဟာမိတ်အဖွဲ့ မှ အကူအညီ ​ပေးခဲ့​ကြောင်း သိရသည်​ #ရဲသီဟ Lwin Oo
Posted inသတင်းLeaveaComment on #ထိုင်းထီပေါက်တဲ့မြန်​မာ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်​သားဇနီး​မောင်​နှံ
အမေ ကို ဆေးကုပေးဖို့ အတွက် မီးသဂြိင်္ုလ်စက်မှာ လူသေအလာင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ကလေးလေး
အမေ ကို ဆေးကုပေးဖို့ အတွက် မီးသဂြိင်္ုလ်စက်မှာ လူသေအလာင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ကလေးလေး ……….. အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတစ်ယောက် မကြောက်နိုင်ပဲမိခင်ဆေးဖိုးအတွက်သဂြိုလ်ပေးနေရပါတယ် (၁၁)နှစ်ဆိုတာမိဘရင်ခွင်မှာဆိုးနွဲ့လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုအခွင့်ရေးကိုတော့ခလေးတိုင်း မပိုင်ဆိုင်ကြပါဘူး ……. ငွေကြေးချို့တဲ့လွန်းတဲ့မိသားစုကကလေးတွေ အသက်မပြည့်ခင်အလုပ်လုပ်ကြတာတွေအများကြီးပါပဲ ဒါပေမဲ့ ဒီ ထိုင်းကောင်လေးရဲ့ ဘ၀ကတော့ လွန်စွာသနားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ …. သူ့ဖခင်သေဆုံးသွာြး့ပီး မိခင်ကအိပ်ယာကမထနိုင်တဲ့အခါ သူ့ အတွက်အားကိုးစရာခိုနားစရာမရှိတော့ပါဘူး .. အရိပ်မဲ့သွားတဲ့ ခလေးလေးတခုထဲသာ့လုပ်နိုင်တာက မိခင်ဆေးဖိုးနဲ့မိသားစုထမင်းဖိုးကိုရုန်းကန်ဖို့ပါပဲ ဒါကြောင့် သူကျောင်းကထွက်ပြီး မီးသဂြိုလ်စက်မှာလုပ်ရပါတယ် .. သာမန်လူကြီးတွေတောင် အသုဘအလောင်းကိုင်တွယ် မီးရှို့းရတဲ့အလုပ်ကအင်မတန်ခက်ခဲလှပါတယ် ဒါပေမဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတစ်ယောက်က လုပ်နေရတယ်ဆိုတာရင်နာဖို့ကောင်းလှပါတယ် ဒီလိုမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပြန်တော့ မနားရပြန်ပါဘူးရေမိုးချိုးပြီးအမေ့အတွက်ဟင်းချက်စတာတွေ ပြီးတော့မှအိပ်ယာဝင်ရပါတယ်နောက်နေ့မနက်အိပ်ယာနိုးတော့ အလုပ်သွားရပြန်တဲ့ သူ့ရဲ့နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေက ကလေးတစ်ယောက် အတွက်အင်မတန်ပင်ပန်းလွန်းပါတယ် သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကအင်တာနက်ပေါ်ပျံနှံသွားပြီး ကူညီမဲ့သူရှိဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ် မီဘကိုလုပ်ကျွေးတဲ့ ကလေးလေး ကံ ကံရဲ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on အမေ ကို ဆေးကုပေးဖို့ အတွက် မီးသဂြိင်္ုလ်စက်မှာ လူသေအလာင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ကလေးလေး
တပ်မတော်သားများနှင့် အင်တာနက်တွင် ပုံတင်ခြင်း
တပ်မတော်သားများနှင့် အင်တာနက်တွင် ပုံတင်ခြင်း တပ်မတော်သားသည်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်ပြီးပါက အနားယူချိန်တွင် အရပ်သားတစ်ဦးအဖြစ် နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပဒေမချိုးဖောက်ပါက လွတ်လပ်စွာ အင်တာနက်အွန်လိုင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးခွင့်ရှိသည်။ အရပ်ဖက်အ၀တ်အစား၊ မိသားစုဆွေမျိုးများနှင့် ပျော်ပါးမှုများအား လွတ်လပ်စွာ တင်ခွင့် ဖော်ပြခွင့်ရှိသည်။ တပ်မတော်သားများအား ဖေ့စ်ဘွတ်မသုံးရဟု တားမြစ်မထားချေ။ တာဝန်ချိန်ယူနီဖောင်းဖြင့် မသင့်လျော်သော ပုံများ မတင်ရန်သာ ညွှန်ကြားထားသည်။ သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏အား တပ်မတော်သားတိုင်း မိမိကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း မရှိသေးသောကြောင့် ယူနီဖောင်းနှင့် ပုံများ မတင်ရန် ကန့်သတ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တန်းပြည့်စစ်မှုထမ်းချိန် သို့မဟုတ် ယူနီဖောင်းဖြင့် တပ်မတော်အဖွဲ့စည်းတစ်ရပ်ကိုယ်စားပြုချိန်၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်၊ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားချိန်တွင်မူ တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်အား လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဖြစ်စဉ်များအား နောက်တွင် တစ်ဦးချင်းပြဿနာဖြစ်တိုင်း လိုက်ဖြေရှင်းနေရပါက တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း၏ ပုံရိပ်အား […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on တပ်မတော်သားများနှင့် အင်တာနက်တွင် ပုံတင်ခြင်း
လစ်ဗျားမှာ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ… မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားကိုးစရာ လိုနေပြီလား….
အချိန်ခနလေးပေးပြီးဖတ်စေချင်တယ် ********************************** မျိုး မြင့် အောင် post အားကူးယူသည်။ လစ်ဗျားမှာ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ… မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားကိုးစရာ လိုနေပြီလား…. တစ်ချိန်က ပြင်သစ်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးသော လစ်ဗျားနိုင်ငံသည် အာဏာရှင်ကဒါဖီလက်ထက်တွင် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပြီး ကျွန်စနစ်ပျောက်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း မွေးဖွားလာတာနဲ့ ဒေါ်လာ၁၀၀၀ ဘဏ်စာရင်းထဲ ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့၏ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး အာရပ်နွေဦး ရောင်စုံကာလာလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် လစ်ဗျားအာဏာရှင်ကဒါဖီအား ဖြုတ်ချကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ လစ်ဗျားနိုင်ငံအား ပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် ဖြစ်မြောက်အောင် မကူညီဘဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ပစ်ထားလေတော့သည်။ လက်ရှိတွင် လစ်ဗျားနိုင်ငံအတွင်း အုပ်ချုပ်မှုပျက်ပြားကာ အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်များက အဖွဲ့များစွာထူထောင် ခိုးဆိုးလုယက်၊ ကျွန်ပြု၊ လူကုန်ကူးလျှက်ရှိကြသည်။ ၁၀ကျော်သက် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ၃၅၀ခန့်ဖြင့် ရနိုင်ပြီး ဒေါ်လာ၁၀၀၀လောက်ပေးနိုင်ပါက သန်မာသည့် ယောက်ျားတစ်ယောက်အား ကျွန်ပြုခိုင်းစေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဥရောပသည် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ၊ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on လစ်ဗျားမှာ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ… မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားကိုးစရာ လိုနေပြီလား….
ရုရှားဖျက်သင်္ဘော Panteleev အလည်လာမည်
ရုရှားဖျက်သင်္ဘော Panteleev အလည်လာမည် ရုရှားရေတပ် ပစ္စိဖိတ်တပ်တော်စုမှ ဖျက်သင်္ဘော Panteleev ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ယနေ့မှ စတင်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ၄ရက်တာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်မယ်လို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရုရှားသံရုံးက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဒဝပ် မီးခေးလော့ဗ် ဦးဆောင်တဲ့ ရေတပ်စစ်သည် ၂၉၃ဦးပါ ရေငုပ်သင်္ဘော တိုက်ဖျက်ရေး သင်္ဘော Panteleev ဟာ သီလဝါဆိပ်ကမ်း မှာ ဆိုက်ကပ်မှာဖြစ်ပြီး ၊ ဧရာဝတီ ရေတပ်စခန်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်း သွားရောက် လည်ပတ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုခရီးစဉ်ဟာ ရုရှားနဲ့ မြန်မာအကြား ချစ်ကြည်ရေး အဓွန်ရှည်စေရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး ပိုမို အားကောင်းလာစေရန် ၊ အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားမှု […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ရုရှားဖျက်သင်္ဘော Panteleev အလည်လာမည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ဟု ICG သတိပေး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ဟု ICG သတိပေး မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေး၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ခိုလှုံနေသော ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် စစ်သွေးကြွ များက နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် မွတ်ဆလင် မဟုတ်သူများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ် လာနိုင်သည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံ အခြေစိုက် ပဋိပက္ခကာကွယ်တားဆီးရေး နှင့် ဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သည့် နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခလေ့လာရေးအဖွဲ့ International Crisis Group (ICG) က ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာ အသစ်တခုတွင် သတိ ပေးလိုက်သည်။ ICG က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နောက်ထပ်အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံများကိုလည်း သတိပေးလိုက်ပြီး […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ဟု ICG သတိပေး
#ကဲ ရွှေဒီလို အ၀ယ်မှားတော့ မသိသူတွေ ခံနေရပြီ
#ကဲ ရွှေဒီလို အ၀ယ်မှားတော့ မသိသူတွေ ခံနေရပြီ (ယခုတင်ပြမူက စေတနာပါ အပုပ်ချခြင်းမဟုတ်ပါ။ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။ဘောင်ချာ ကျွန်တော်မှာ ရှိပါတယ်။) ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ရွှေဘယ်လို ၀ယ်သင့်တယ် တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ် လက်တွေ့ ဘောင်ချာလေးကပြောတဲ့ ဈေးဝယ်သူခံနေရ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အသိပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်ဆိုင်ကို ရွှေလာဝယ်သူက ငွေမလောက်လို့ သူများဆိုင်က ရွှေကို ၀ယ်ဖို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်တော့ ၁၇ ရွှေး ကို ၁၈၀၀၀၀ ကျပ် ကျနေတော့ တွက်ကြည့်လိုက်ရာ အံ့သြလောက်တဲ့ မကြားဖူးတဲ့ကြောက်စရာဈေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရောင်းဈေး ၈၇၀၀၀၀ ကျပ် သူကရွှေဈျေးမပါဘဲ ရေးထားတာက ၁၁၃၆၈၄၂ ကျပ် ကြားတောင်မကြားဖူးပါ။ ချိန်ကြည့်တော့ .၅ ရွှေး လျော့ပါတယ်။ သူရွှေ ကို ၁၄ ပဲ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on #ကဲ ရွှေဒီလို အ၀ယ်မှားတော့ မသိသူတွေ ခံနေရပြီ
လူကြီး မိဘများလုံးဝကျော်မသွားပါနဲ. ကလေးတွေ အသက်နဲ.ဆိုင်လို့ပါ တစ်ရက်တည်းမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတယ်။ မနက်ပိုင်း ကလေးဆေးခန်း “နင့်ကိုငါ သတ်မိတော့မယ်” ကလေးအဖေက သူ့မိန်မကို ကြိမ်းမောင်းနေတာ။ ကလေးနှာခေါင်းထဲ ပြောင်းဖူးစေ့ ဝင်သွားတာကို သူ့မိန်မ ကလေးကို ဂရုမစိုက် လို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီး ဒေါသတွေထွက်နေလို့ တော်တော် ဖျောင်းဖျယူရတယ်။ ကျနော်ရှင်းပြတယ်။ (၁)နှာခေါင်းထဲက ပြောင်းဖူးစေ့ကို ဆေးခန်းမှာ ကြိုးစားထုတ်ကြည့်မယ်…မရရင် (၂)ဆေးရုံမှာ အိပ်ဆေးပေးပြီး ထုတ်မယ်…မရရင် (၃)နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ မောင်မောင်သန်းရှိတဲ့ ကျိုင်းတုံ(မိုင်တစ်ရာခန့်ဝေး)သွားမှရမယ်လို့… ဆေးခန်းမှာ ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကံဆိုးတယ်။မရဘူး။ ဆေးရုံခေါ်သွားရတယ်။ ဆေးရုံမှာ အိပ်ဆေးထိုးပြီးထုတ်တယ်။ကံကောင်းတယ်။ပြောင်းဖူးစေ့ ထွက်သွားတယ်။ “အခုမှ စိတ်အေးရတယ်ဗျာ…ကျိုင်းတုံသွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် ဆရာ..” “ဟုတ်တယ်..မသွားရတော့ဘူး…နောက်မဖြစ်အောင် ကလေးကို ဂရုစိုက်ပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ..ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်နော် ဆရာ” “ဟုတ်ပါပြီဗျာ” အဲဒီနေ့ ညနေပိုင်း ဆေးရုံကနေဖုန်းဆက်လာတယ် […]
Posted inကျန်းမာ​ရေး, သတင်းLeaveaComment on လူကြီး မိဘများလုံးဝကျော်မသွားပါနဲ. ကလေးတွေ အသက်နဲ.ဆိုင်လို့ပါ